Hiran State - News: HS:- Baarlamaanka cusub oo horey loo qoondeeyey inuu noqon doono 225 kadibna gadaal loog adaray 50 mudane..
HS:- Baarlamaanka cusub oo horey loo qoondeeyey inuu noqon doono 225 kadibna gadaal loog adaray 50 mudane..
HS:- Mudo dhawr bilood ka hor waxaa lagu dhawaaqay in tirada guud ee baarlamaanka soo socda ay noqon doonto 225 taasi oo beelaha Soomaaliyeed u qeybsadeen si siman walow ay qaarkood markii hoos loo dhaadhacay is boobeen hadane sidaasi ay tahay waxaa baarlamaanka lagu daray 50 xubnood.
Hadaan ku hormarno reer Hiiraan tan iyo markii lagu dhawaaqay in baarlamaanka lagu daray xubno cusub ma jirin cid meesha wax lagu qeybinayo shacabka Hiiraan ugu raadisay waxaana lagu soo waramayaa in 50-kii xubnood ee lagu daray baarlamanka cusub ay dhawr beelood si hoose u qeybsadeen siiba beelaha ay sida gaarka ah ugu soo jeedaan masuuliyiinta hogaamineyso TFGda.
Markaad eegto qaabka wax loo qeybsaday waxa ka jira dalka Soomaaliya sadbursi aan caadi aheyn. marka leysgu geeyo guud ahaan mudanayaasha baarlamaanka ee u meteli doona reer Hiiraan baarlamaanka cusub ee soo socda tirada ay heleen marka laga hadlayo beelaha Hawiye waxaa ka badan xubnaha ay heleen beeelaha Abgaal iyo Habargidir.
Marka leysku keeyo dhawr beelood oo ka mid ah beelaha Daarood waxaa ka tiro badan xubnaha ay heleen qoyska uu ka dhashay R/wasaaraha amaba beesha Majeerteen.Hadaan sii qeexno beesha Abgaal waxey tiro ahaan u heleen tiro ka badan tirada ay heleen beelaha Xawaadle iyo Gaaljecel. sidoo kale beesha Habargidir waxey heshey tiro ka badan marka leysku geeyo tirada ay heleen beelaha kala ah Murusade, Jajeele, Baadicade, Jidle Shiikhaal iyo reer OwHasan.
Hadaba waxaa isweydiin leh maadaama uusan jirin tiro koob sax ah oo qeexaya sida ay beelaha Soomaaliyeed u kala badan yahiin amaba degaanada ay ka soo jeedaan ugu kala badan yahiin waxaa isweydiin leh beelahani ma iyagaa waxa qeybiya oo sidey doonaan ka yeela mise beelaha kale ayeysan jirn cid u hadasha oo miiska u garaacda si waxa la qeybsanayo loogu qeybsado cadaalad?
Hadaba qormadeena danbe bal nala eeg sida ay beelaha u heleen xubnaha kadibna isweydii in Soomaaliya ay nabadi ka soo dhaw tahay amaba uu sadbursi ka dhamaaday. inkasta oo ay wanaagsanaan laheyd in dhaqanka Soomaalida laga saaro qaabkaan qaldan ee ay wax ku qeybsadaan ee 4.5-ka loogu yeero si hadii qolo Soomaalida ka mid ah ay hesho tiro yar u aragto tiradii ay weysay iney ku maqan tahay walaal kale oo Soomaaliyeed. inta taasi laga gaarayoo bisheyl noocaasa la imaanayaan bulshada Soomaaliyeed waa lama huraan in la iftiimiyo sidey wax u jiraan.
La soco wararkeena danbe si aad xog ogaal u noqoto
· admin on August 01 2012 16:26:52 · 0 Comments · 2614 Reads ·
14,614,620 unique visits